UBukhosi kuqala okunye kuza kamuva – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/UBukhosi kuqala okunye kuza kamuva
Imeya waseZululand iNkosi uMzamo Buthelezi (Isithombe: nguBanele Bhengu / Ingabadi Media Images)
Ngesikhathi lapho kuhlale kunenkulumompikiswano mayelana nobudlelwano phakathi komasipala nezinhlaka zoBukhosi, uMkhandlu iZululand ivelelwe okungandile. Lo Mkhandlu ongeminye kweyaziwayo ezweni uholwa yiMeya ephinde ibe yiNkosi yesizwe. Lena yiNkosi uMzamo Buthelezi obheke izwe leSILO eMbongombongweni, oPhongolo. Ungomunye waMakhosi asemancane ngeminyaka lapha kweleNdlovukazi uMthaniya nokho uphathiswe okuningi njengoba engagcini nje ngokuba yiMeya yoMkhandlu iZululand kanye neNkosi yesizwe kepha iqembu lepolitiki ayilungu lalo lamenza iSekela Mengameli walo.
Njengengxenye yokwazi kabanzi ngayo nangomsebenzi wayo, UBUKHOSI buhambele eMbongombongweni kanye nasemaHhovisi oMkhandlu nayilapho ithuba eliyinqabakutholwa livele khona. Lifika ithimba loBUKHOSI endaweni yaseMbongombongweni likhangwe wubuhle bendawo, ebinokuthula ingenakho nokuphithizela. Ngesikhathi elitheleke ngaso obekuyizikhathi zasekuseni abafana bebenza imisebenzi eyejwayelekile bekhipha izinkomo obungathi nxa ubuka ubuhle bazo uphike ukuthi le ndawo njengezinye KwaZulu-Natal ike yahlaselwa yisomiso.
Lithe nxa lingena nje lamukelwa yinsizwa obubona ukuthi ibililindele nokuthe lingabingelela ngomoya ophansi yalamukela lazizwa lisekhaya. Akudlulanga mizuzu mingaki labe seliqala elabe lize ngakho okuwukuxoxa kabanzi neMeya nethe nxa iqala ukukhuluma yaqala ngokwenaba ngomlando wakwabo kanjalo nendawo esabe sikuyo. Iveze ukuthi ingeyesikhombisa ekubeni yiNkosana eMbongombongweni kusuka eNkosini uKlwana yena owayelandelwa iNkosi uKhoboyela, kwaba iNkosi uBantubensumo, kweza iNkosi uNkosiyenhliziyo okwathi ngemuva kwakhe kwangena esihlalweni iNkosi uMfanawenjinga onguyise yalowo oyiNkosana yesizwe manje.
INkosi uButhelezi inezinduna eziyisikhombisa ngaphansi kwayo kanti isizwe sayo sinezigodi eziyisikhombisa futhi.
Ikhuluma ngayo iMeya ithe, “Mina ngizalelwe lapha oPhongolo ngowe-1977 kodwa kuthe uma ngikhula kwacaca ukuthi izikole zikude kwaphoqa ukuba umama uMaKhukhalo ahambe nathi aye eDumbe. Yilapho engifike ngafunda khona eBilanyoni Primary ngaqedela eKwasa High School. Ngemuva kwalapho ngaya eVryheid College ngenza izifundo zeMarketing nokuthe uma ngiqeda ngaqashwa udokotela wezilwane uDkt uTheron. Kuthe uma ngisuka lapho ngaqashwa ibhange lakwa-Absa ngowezi-2001. Ngisebenze lapho ngaze ngenyuka ngabanesikhundla sokuphatha amanye amagatsha akwa-Absa nokuyilapho engisungule khona igatsha laseNkandla nelaseJozini lebhange i-Absa. Kuthe kusenjalo abazali bangicela ukuba ngiyeke umsebenzi ngizothatha isikhundla soBukhosi. Lokho ngangingakuthandi kodwa amazwi abo angithinta kwaba ukuthi uma ngiqhubeka ngiphikisana nabakushoyo kusho ukuthi angisihloniphi isizwe nabazali bami okuyibo abangilethe kulo mhlaba. Ngaba yiNkosi yesizwe sakwaButhelezi eMbongombongweni kanjalo, ngaphoqeleka ukuba ngishiye umsebenzi wokuba isikhulu sebhange i-Absa,” kusho iNkosi uButhelezi.
UShenge uveze ukuthi kwabo babeyisithupha kodwa ababili bedlula emhlabeni kanti usesele nodadewabo abathathu. Uphinde waveza nokuthi ngesikhathi esaqhubeka nomsebenzi wasebhange kepha esesithathile isihlalo, ubehola imiholo emibili owokuba yiNkosi nowokuba ngumsebenzi wase-Absa. Uthe umholo woBukhosi wayengawusebenzisi kodwa wayewufaka ohlelweni lwakhe lokusiza umphakathi ompofu. Kulolu hlelo kwakuphekelwa izingane emphakathini ezingaphansi kweminyaka eli-13 ukuze zihlale ziphilile. “Lolu hlelo lwabe lusondelene kakhulu nenhliziyo yami njengoba ngangiyibona imiphumela yalo emihle empilweni yezingane ezabe zihlomula kulo” kusho uShenge emamatheka.
Engxoxweni naleli phephandaba, iNkosi uButhelezi idalule ubuhlungu obadalwa ngumbuso wobandlululo esizweni. Lapha iveza ukuthi ngenxa yokuhlakazwa wumbuso wabacindezeli amalungu esizwe asabalala izwe lonke abanye babheka koNondweni kanti abanye basabalale nesifundazwe iKwaZulu-Natal balibhekisa koDumbe naseJozini. UShenge uthe izibazi zalokhu ziyabonakala emzini waseMbongombongweni ngenxa yokuthi izinsiza azikho eduze kwabantu, ngisho izikole nemitholampilo akukho eduze nabantu. Le ndawo izungezwe kakhulu amapulazi abaMhlophe neziqiwi kodwa okuqaphelekayo ukuthi yindawo enothile.
Khona lapho ubuye wakhala ngokwenzelwa phansi nguHulumeni wedemokhrasi, nathi ngokungaqondi impilo yabantu basemakhaya ubulale izinto eziningi ebezenza ukuphila emakhaya kube ngcono, wenze isibonelo ngohlelo lwamanzi nathe lwama ngenxa yokungenelela kukaHulumeni.
“Ngaphambi kokuba zonke izinto ziphathwe uHulumeni, besiziphilela kahle lapha eMbongombongweni sinohlelo lwethu lwamanzi, abantu bekhokha imali engu-R10 njalo ngonyaka ukuze siqaphe uma kukhona ipayipi elifile noma okumele kulungiswe ngenxa yalokho, yonke imizi eyakhele lesi sizwe ibinamanzi emakhaya ingawesweli. Kuthe uma uHulumeni esethatha lolu hlelo lwethu, wathi abantu abangakhokhiswa mali. Lokho kudale izinkinga ngoba kuqale kwabanesimo lapho kuvele kuphele amanzi, okuyinto esingakaze siyibone kule ndawo yethu. Okunye abantu bebefika bezolimela iNkosi ngenhloso yokuthi uma kukhona umuzi odinga ukudla sikwazi ukuwusiza njengoBukhosi besizwe. Nalokho akusenzeki ngenxa yokuthi kutshalwe inzondo kubantu bakithi ngoBukhosi babekwa sengathi buxhaphaza umphakathi uma ulimela iNkosi yesizwe. Lokho kudale ukuthi sibenabantu abavilaphayo abangafuni ukusebenza nokuzenzela kodwa ababheka ukukhangezwa,” kubalisa uShenge.